တာချီလိတ်မြို့၌ ယာဉ်တစ်စီး ဆီပိုက်ပေါက်၍ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ ယာဉ်မောင်း ထွက်ပြေး - Yangon Media Group
တာချီလိတ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်၌ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ဆီတိုင်ကီပေါက်ကာ မီးလောင်ကျွမ်းမှု နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက် နံနက် ၅ နာရီ မိနစ် ၅ဝက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
တာချီလိတ်မြို့ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက် ရွှေမြို့တော်ကားဂိတ်အနီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးဘေးတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက် နံနက် ၅ နာရီ မိနစ် ၅ဝခန့်က မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး မီးလောင်နေကြောင်း သတင်းအရ တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးကြည်စိုးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ် ဇော်မျိုးသန့်နှင့် ရဲထိန်းတပ်ဖွဲ့များ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး ဦးအောင်ဇော်လင်း နှင့်အဖွဲ့မှ သွားရောက်မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ နံနက် ၆ နာရီ မိနစ် ၂ဝတွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ အာခါဈေးမီးပွိုင့်ဘက်မှ တာချီလိတ်မြို့ အတွင်းဘက်သို့ အမည်မသိ အမျိုးသားနှစ်ဦးမောင်းနှင်လာသော SHAN/7Jxxxx နံပါတ်ပါ Honda Integra အဖြူရောင်မော်တော် ယာဉ်သည် ယာဉ်ရှေ့အင်ဂျင်ခန်းအတွင်းမှ ဆီပိုက်ပေါက်ပြီး အပူရှိန်ကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်မောင်း အမျိုးသားမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။ ယာဉ်မှာ ရှေ့အင်ဂျင်ခန်းနှင့်ယာဉ်အတွင်းပိုင်း မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မီးလောင် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ် ၁၅သိန်းခန့်ဖြစ်သည်။ အမှုမှ မော်တော်ယာဉ် မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းစဉ် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားသူ ယာဉ်မောင်းအား ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရန် တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၂၃ဝ/ ၂ဝ၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂ဝ၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် ပြည်နယ်အစိုးရက ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တင?
ယခုဘဏ္ဍာနှစ် သုံးလကျော် ကာလအတွင်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကာလတူ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏထက် ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ပိုရ?
ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍ၏ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ပြိုကွဲသွားပြီဟု MCEA ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဆို